China ọkọlọtọ feeder emepụta na suppliers | Baiyi
Aha aha: ọkọlọtọ feeder
Njirimara:fechaa imewe, adaba na Mbupu, elu na ọdabara ike, mfe na-arụ ọrụ, na-eri irè. Ohere maka akwụkwọ, labeelu, akwụkwọ igbe, nkịtị plastic akpa wdg O nwere ike na-ike na TIJ ngwa nbipute, CIJ ngwa nbipute wdg, ma ọ bụ labeling usoro, laser ebi, nke ọfiọkde ebi akwụkwọ iche iche nke ederede, oyiyi wdg anya-akara.
Series nke Standard feeder adopts esemokwu ụkpụrụ na-aghọta nri & nnyefe gụnyere akụkụ atọ na Ọdịdị: udia 、 iga 、 auto collection. Ọ nakweere ihe igwe anaghị agba nchara na imepụta ihe eji eme ihe eji eme ihe, nke nwere ike ịkwado ya, kwadoo maka mbupu, bara uru iji chekwaa ụgwọ mbupu Unique nri imewe Ọdịdị-eme ka ya nkuchi ike ike, ukpụhọde adaba, ọrụ mfe. Enwere ọtụtụ nhọrọ nhọrọ, nke nwere ike imeju onye ahịa ahụ nke ọma, na-akwụ ụgwọ. Ngwaahịa kwesịrị ekwesị: akwụkwọ, akara, igbe akwụkwọ, akpa plastic wdg. Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ iji feeder a na CIJ ngwa nbipute, onye obibi akwụkwọ TIJ, usoro nyocha, mbipụta laser ibipụta ụdị TEXT, ụkpụrụ wdg.
Ọzọkwa, n'ihi na ị na-enweta esemokwu ala-nri mode, ndị mmadụ nwere ike tinye ngwaahịa na-enweghị igwe na-akwụsị. Enwekwara ike iji ya rụọ ọrụ arụ ọrụ agụụ, nke na-eme ka ngwaahịa ahụ na-agba nso na eriri ahụ, na-enweghị amị amị, na-enweghị mgbanwe ， elu ahụ dị larịị, nke dị mma maka ịgbaso mbipụta ma ọ bụ teknụzụ ndị ọzọ. Ejiri ya rụọ ọrụ nchịkọta onwe ya na imewe ụlọ elu, nke na-eme ka ibu ibu na-agakọ otu otu wee nakọta n'usoro.
enwere ike ịhazi ya maka ozi ndị ọzọ, biko pịa ebe a n'okpuru:
Ihe osise maka ntụgharị
1. KN95 / KF94 ihu nkpuchi nri & obibi
1. akụkụ: L * W * H = 1700 * 640 * 800mm
2. ibu: 65KG
3. voltaji: 220VAC 50-60HZ
4. Ike: banyere 500W
5. Speed: 0-300pcs / min (tụlee ngwaahịa bụ 100MM)
6. Belt ọsọ: 0-60m / min (mgbanwe)
7. dị ngwaahịa size: (60-300) * (60-280) * 0.1-3mm
8. ọsọ akara usoro: ugboro ntughari ma ọ bụ brushless DC ọsọ ụkpụrụ
9. moto: Ntughari oku ma obu Brushless DC moto
10. ngwaahịa dị: ụdị akwụkwọ, akpa rọba, kaadị, akara wdg.
11. igwe ozu ihe: igwe anaghị agba nchara
12. echichi ụdị: onwe echichi, n'ala-guzoro
13. nhọrọ nhọrọ: agụụ agụụ, auto-collection
Osote: tebụl-top feeder
ọgụgụ isi agụụ atụ-elu, ihe ọsọ ọsọ & ...
Standard rewindo na TTO ngwa nbipute
Nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu na pụrụ iche ind ...
Standard nwere ọgụgụ isi kaadị nri igwe
Nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu